PPA ohuru maka Chromium na Ubuntu 12.04 | Site na Linux
PPA ohuru maka Chromium na Ubuntu 12.04
Akwụkwọ ntuziaka nke Isi Iyi | | Aplicaciones, GNU / Linux
Anọ m na-achọ ile anya Ubuntu 12.04 LTS Pangolin nkenke, karịa ihe ọ bụla iji hụ akụkọ banyere Ịdị n'Otu ma hụ ma ọ bụrụ na emesịrị iji ya mee ihe (nke ọ ghọrọ, ma hụ ya n'anya n'ezie: D). Ihe niile rụrụ ọrụ dị ka amara ma e wezụga maka chromium, nke na-arụ ọrụ nke ọma kwa mana ọ na-enyo, dị ka mgbe niile, mbipute dị na Eluigwe bụ nnọọ mbubreyo (bụ 18.0.1025.168, nke pụtara na Jenụwarị!), Ma o doro anya na PPA nyere site na otu mmepe (ppa: chromium-kwa ụbọchị / anụ) gbahapụkwara otu ụdị ahụ n'ihi ọnọdụ m na-amaghị.
Achọghị m ka m chịkọta ndị ọhụrụ version onwe m otú ahụ ka m malitere achọ ọzọ PPA na mgbe a mgbe m mesịrị chọta ya. Usoro ịgbakwunye ya bụ nke mbụ; Anyị na-emeghe a console na mado ndị na-esonụ e:
1 Maka nsụgharị anụ
2 Maka ụdị mmepe
Maka nsụgharị anụ
Maka ụdị mmepe
Na nke ahụ, ma ọ bụrụhaala na ahapụghị PPA a, anyị nwere ike ịnwe ụdị nke kachasị ọhụrụ chromium na nke anyị Ubuntu 12.04 (nke n'oge edere ntinye a bụ maka mbipute ahụ 21 ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ).
Achọpụtara m na ọtụtụ blọọgụ kwadoro PPA onye ọrụ Tobias Nwoke (ppa: towolf / mgbape), ma, dị ka ya onwe ya na-akọwapụta na Launchpad, na PPA nwere ụdị Chromium nke gbanwetụrụ maka iji onwe gị, biko biko ejikwa ya. PPA nke m na-egosi gị ee e bu n’obi ime ya ọhaneze, yabụ ọ ga - echere ka ichere onye ọrụ kere ya ka ọ kpebie ịga n'ihu na ndozi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » PPA ohuru maka Chromium na Ubuntu 12.04
Pfff, sistemụ arụmọrụ dị ka GNU / Linux na sistemụ na-agba ume dị egwu ... Ubuntu ọjọọ
Ha nwere ike ọ dịkarịa ala mejuputa ihe dịka OpenSUSE si Tumbleweed: ifriizi isi n'etiti mbipụta ma na-eme ka ndị ọrụ nweta ume.
N'ezie, mgbe m si Arch rute ma chọpụta na m laghachiri na ị ga-agakwuru nke a na ihe ahụ ka e wee nwee mmelite gị, emere m ihu http://i.imgur.com/IC4Rk.jpg
Ọ bụ ezie na m na-ekwusi ike na ịdị n'otu a dị mma. xD
Hahaha xD na meme ahụ dị mma!
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ekwenyere m na ịdị n'otu dị ezigbo mma ma na-akawanye mma site na njupụta na oke, ọ masịrị m nke ukwuu, agbanyeghị-maka m- enwere isi ihe anọ, gbaghara isi ihe ise na-egwu megide ya ebe ọ bụ na GNOME3 adịghị, ebe Ndị devs ahụ na-enye onye ọrụ ya usoro zuru oke nke na ọ nwere ike iji ya mee ihe ọ chọrọ, ndị Canonical emeela ka o doo anya na ohere onye ọrụ nwere ike ịgbanwe Unity ga-adị ntakịrị - lee ihe nwute ha mụtara nke ọma ihe kacha njọ banyere ya. Zanlọ ọrụ Manzanita:
1. Ntuziaka Ayatana kwuru na menu ga-apụta ozugbo ntụpọ pointer ahụ metụrụ menu mmanya: njehie, ha chọrọ ịbụ ndị ọhụụ na ha na-eme ihere, ma ọ bụrụ na ha ga - abụ ndị sitere n'ike mmụọ nsọ nke Apple, ma ọ dịkarịa ala na-akpali ụmụ nwoke nke ọma. Ka m nwere menus zoro ezo, aga m eji òké gaa na ebe ihe menu iji mee ka ha pụta, lee ebe menu m na-achọ bụ, wee gaa ya; n'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na a na-ahụ ha mgbe niile (dịka ha dị na MacOS) Enwere m ike ozugbo na menu nke masịrị m.
Oge ụfọdụ gara aga mgbe m jiri Ubuntu rụọ ọrụ ọnwa ole na ole (echere m na 11.04 na 11.10) M meghere ahụhụ na Launchpad ebe ọ kọwara njehie echiche a na ọtụtụ devs kwughachiri ya wee kwuo na ọ bụ ezie na ha ekwenyeghị na ọ ga-ekwe omume iji mejuputa m Nchọpụta na ntinye nke ịdị n'otu site na ndabara, ha ga-anwa ịnwe opekata mpe otu nhọrọ ka menu wee pụta ìhè mgbe niile. Ọ bụ ihe…
2. Onu ogugu di nma na Unity bu Python. Enweghị m ihe ọ bụla n'onwe ya megide Python ma e wezụga na ọ nweghị ụzọ asụsụ edemede - M pụtara na a chịkọtaghị - enwere ike iji ntọala maka isi interface nke usoro ahụ, WTF!
Ihe dị mkpa dị ka Uinity kwesịrị ijide ya na C ++, ọ bụghị ihe ijuanya na ịdị n'otu nwere arụmọrụ dị ala ma ọ bụ SLOW - ọ bụ ezie na na 12.04 ọ meziwanyela nke ukwuu-, ọ dị ezigbo nwayọ, mgbe ịpịrị akara ngosi menu enwere igbu oge nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nke abụọ ruo mgbe ụlọ Unity pụtara -nke ahụ na-eji Super igodo, Aghọtaghị m na Canonical ahọrọla Eke Ọgba maka mmepe ha niile, mana ihe nwere mmetụta dị ka Unity ... enweghị ndị isi, bụrụ ndị dị njọ .. .
3. Laptọọpụ m nwere mkpebi nke 1600 × 900 (ihe ruru 16: 9, 17 ″) na nchịkọta menu bụ nnukwu ihe mkpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihuenyo niile yana akara ngosi ngwa ọ na - egosi - nke dịkwa njọ maka a OS nke 2012. Amaghị m ihe ha bu n’obi ime gbasara ya mana echeghị m na ha zubere ịgbakwunye nhọrọ ka onye ọrụ wee nwee ike imebi akụkụ ndị a, ekele maka na ha gbakwunyere nhọrọ iji mee ka akara ngosi mmanya pere mpe.
4. Ha wepụrụ nhọrọ iji zoo akpa mmanya Unity na-akpaghị aka ma ọ bụ mgbe windo na-eru nso, WTF !!!
KA ANYA HE: Aghọtara m na ndị nzuzu ndị ọrụ na-asị: «ihe mere, obere ihe ndị dị n'akụkụ m na-apụ n'anya !! Otu onye nyere m aka, enwere m nje na Ubuntu !!! ", Enweghị m obi abụọ na enweela" mkpesa "nke ụdị a, mana opekata mpe ha na-enye onye nhọrọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ na-akpaghị aka zoo windo ahụ, dịka na nsụgharị mbụ nke Unity.
Ozi ikpeazụ a, na ha anaghịdị enye anyị nhọrọ nke otu anyị chọrọ iji Unity bụ ihe na-enye m nsogbu ma na-etinye m na njikere: Unitydị n'otu abụghị maka ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ, ọ bụ ihe Canonical chọrọ ka ọ bụrụ - ọzọ, Dị ka ọ dị na Apple, Steve Jobs kwuru otu ụbọchị: «ekwesighi inye ndị ọrụ ọtụtụ nhọrọ ma ọ bụ nye ha nhọrọ, ebe ọ bụ na ọtụtụ oge ha amaghị ihe ha chọrọ (ruo ebe a ọ fọrọ nke nta ka m kwenye na ya ) that's why we must decide for them »- mba sir, m ikpe m ekpebi, daalụ nke ukwuu ma Ọ dịghị.
5. Emeghe windo enweghị ike iwelata site na ịpị akara ngosi kwekọrọ na Ogwe Unity .. WTF !!! Ọzọ usi ahụhụ usability ahụhụ, n'ezie na ọ ga-ekwe omume na aga na nsụgharị nke ịdị n'otu na m na-echeta na ọ bụ nnọọ otú iji!
Ọfọn, na post si Shuttleworth n'onwe ya na blọgụ nke aka ya, o kwuru n'ụzọ doro anya na nke a abụghị omume ezubere ya nakwa na a gaghị eweghachi ya na Unity n'ụzọ ọ bụla.
Otu nwere ike ịghọta na ka ha chọrọ Unitydị n'otu ka ha bụrụ interface cross-platform ha na-eche (ma ọ bụ na-anwale ule) na ngwaọrụ mkpanaka, mana eziokwu ahụ bụ na ha na-ewepụ nnwere onwe nke onye ọrụ ịhọrọ otu ha chọrọ iji interface, ọkachasị mgbe atụmatụ ndị a adịlarị Ha dịrị na nsụgharị ndị gara aga, ọ dị oke njọ ma na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ndị na-eme mkpebi na mmepe ha: anyị ga-ahapụ ngwaahịa ngwaahịa-cross-platform, nke a na-ahazi ka ọ dịkarịa ala, ebe ọ bụ na n'ụzọ a anyị na-ahụ otu ahụmịhe onye ọrụ maka ndị ọrụ anyị niile nyiwe niile - Unitydị n'otu agaghị eme mgbanwe maka ụzọ dị iche iche ndị ọrụ ya si eji ya, ha ga-abụ ndị ga-adaba na ịdị n'otu .. WTF !!!!
Ebe m guru - Webupd8, OMG! Ubuntu ma ọ bụ ihe yiri ya - na enwere onye na-ejigide PPA na ụdị nke Unity kacha ọhụrụ iji dozie nsogbu ndị a: menu a na-ahụ anya mgbe niile, zoo onwe ya site na akara ngosi akara, wdg, anyị kwesịrị ịnwale ya iji hụ ka o si arụ ọrụ!
O di mma, ikwuru. Karịsịa, enweghị nhazi anaghị ewute m nke ukwuu n'ihi na m na-ejikarị desktọpụ m dị ka ọ dị, mana maka ọtụtụ ndị ọrụ ọ ga-abụrịrị nsogbu. Ihe ị na-ekwu banyere menus zoro ezo m kpọrọ asị mgbe niile, ọ bụ ezie na ejirila m ya mee ihe, arụmọrụ ahụ dịkwa oke mma, yana maka mkpebi ahụ enwebeghị m nsogbu; M n'ezie tinyere azụ Ebe a ọ dị mma, mana ọ ka gosipụtara na ha ejighị mkpebi ndị ọzọ nwalee ya. Nhọrọ ịzobe na-akpaghị aka ka dị, amaghị m ma ọ bụrụ na ha ewepụ ya mana nke bụ eziokwu bụ na ọ nọ ebe ahụ, ọ bụ ezie na anaghị m arụ ọrụ ya n'ihi na ọ na-arụ ọrụ mgbe ọ masịrị m (na nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ Enwere m asị banyere nsụgharị mbụ). M ga-anwa ụdị nsụgharị ahụ, mana ebe ọ bụ na enweghị m nsogbu na nke a, ahụghị m mkpa. 😀
Ọ dị mma na ị dị n'ọtụtụ isi ma e wezụga isi 2.
Agbanyeghi na Python dị ka ị na-ekwu, ọ baghị oke ọsọ, ọ bụghị asụsụ a sụgharịrị asụgharị n’ihi na Eke Ọgba na-achịkọta C bytecode, ihe bụ na Python bụ ngwakọ dị iche na enweghị m ike ịkọwa ya n’ezi ihe asụsụ na-eme n’ogo dị ala. , ma a sụgharịghị ya nke ọma ma chịkọta ya nke ọma.
Dị n'otu adịghị nwayọ, ma ọ bụ opekata mpe oge igbu oge nke 1 nke abụọ ma ọ bụ karịa anaghị erute m na, n'aka nke ọzọ, ọ bụghị kpam kpam ma ọ bụ ọtụtụ Python n'ihi n'eziokwu ọ nweghị ike. A na-eji ha dịka m ghọtara ụlọ akwụkwọ C na ntọala, nke ejiri Python rụọ ọrụ ngwa ngwa na, n'ezie, Python na Unity kachasị na Dash, HUD na Dock (na ọkara na nke ikpeazụ) ndị ọzọ bụ Gnome ya na Vala na asusu ya nile.
Nke a bụ ebe ihe ọmụma m ruru ma anaghị m anwa anwa ikwu ihe ọzọ. 🙂
Otu ihe ahụ na-arụ ọrụ maka ọgba aghara ọ bụla ma ọ bụ na ọ bụ naanị maka Ubuntu
Ọ ga-arụ ọrụ maka ọgba aghara ọ bụla dabere na Ubuntu ma ọ bụ nke nabatara PPA (ọ bụ naanị Ubuntu na ndị nkwekọrịta na-anabata ha XD) yabụ ọ bụrụ na ị jiri Kubuntu Xubuntu Lubuntu Zorin OS Mint Netrunner ma ọ bụ distro ọzọ dabere na Ubuntu ị nwere ike iji ya.
Achọghị m ịma ihe nchọgharị m na-emelitere, m bụ naanị ịmata ma ekele maka Ama ọ bụ nnọọ aka 😀
N'ezie ị nwere ike itinye ppa na Debian ọ ga-arụ ọrụ, yabụ ọ ga - abụ Debian, Ubuntu na nkwekọrịta nke ma 😉
Ọ bụghị maka Sabayon n'ihi na ịnweghị ike iji Ubuntu PPAs na ya. Banyere distros ndị ọzọ sitere na Debian, enweghị m ike ịgwa gị ihe kpatara PPA a ji akọwa Precise ma ọ dị m ka ndị ahụ anaghị eme nke ọma na distros ndị ọzọ (ndị kachasị mma bụ nke Lucid); mana o nwere ike bụrụ ee, ọ ga-abụ okwu nnwale.
Ah, dị ka Sergio na-ekwu, ya na ihe nkwekọrịta nke Ubuntu 12.04 (Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu na ndị ọzọ) ọ kwesịrị ịrụ ọrụ zuru oke. 🙂
Site na Linux na-ekwu maka Ubuntu? Nne Chukwu O_O
Zaghachi Yoyo Fernández
hehehe! .. ikekwe ọ bụ n'ihi ụfọdụ ụdị xD!
Using na-eji Arch (Manjaro) na M Ubuntu? Nne Chukwu. o_O
JAJAJAJAJA anyi abughi ndi iro nke Ubuntu, anyi abughi otu n’ime otutu akwukwo nke gwara ya okwu ma kwuo okwu banyere ihe ntà banyere ya.
Ajụjụ dị ntakịrị karịa isiokwu.
Kedu ụdị nchọgharị Flash kacha arụ ọrụ? Chromium, Chrome, Firefox ma ọ bụ Opera?
Echere m na Chrome n'ihi na ọ bụ naanị ya ejirila ya rụọ ọrụ ma rụọ ọrụ nke ọma maka ya. Atọ ndị ọzọ enweghị ya (ọbụnadị Chromium).
Ana m eji nsụgharị nke chromium arụ ọrụ, mmepe ọ na-enyekarị nsogbu?
Ejibeghị m ụdị mmepe ahụ ogologo oge, mana mgbe m jiri ha ebe ahụ, emechila emechi mmechi a na-atụghị anya ya, ihu akwụkwọ efu, mkpọka na ihe ndị ọzọ. N'ezie, ọsọ dị elu karịa nke nsụgharị anụ ahụ, mana yana ụkpụrụ ndị anyị ruru ugbu a echeghị m na enwere nnukwu ọdịiche.
Daalụ nke ukwuu maka ozi ahụ, achọrọ m maka ppa kwalite maka chromium
Ezigbo data, enwere mrịrịrịrịrịrịrịrị v18 ka ị chetara m na ọ bịara na Jenụwarị ma ugbu a ọ dị na 21 x x Ugbu a, enwere m olileanya na PPA a ga-ewe otu ụdị.
Zaghachi na TavK7
Daalụ nke ukwuu! Anọ m na mbipute 18 ugbu a hahahaha.
Oge erugo imelite!
[Nkwupụta] Netbooks na desktọọpụ na Fedora
htaccess [UserAgent]: Mee ihe ụfọdụ dabere na UserAgent onye ọrụ